Yega-Yekutengesa Sevhisi kana Kukosha-Yakavakirwa Mitengo - Ichiri Nezve Zvakaitika | Martech Zone
Yega-Yekutengesa Sevhisi kana Kukosha-Yakavakirwa Mitengo - Ichiri Nezve Zvakaitika
NeChishanu, Gunyana 9, 2016 China, Gunyana 22, 2016 Douglas Karr
Nezuro manheru, ndakaenda pachiitiko chakaiswa naPactSafe. PactSafe igore-rakavakirwa zvemagetsi kondirakiti chikuva uye tinya API ye Saas uye eCommerce. Ndiyo imwe yemapuratifomu eSawaS apo pandakasangana nemuvambi paakanga achingokwira uye zvino chiono chaBrian chave chinhu chaicho - chinonakidza.
Mutauri pachiitiko ichi aive Scott McCorkle weSalesforce mukurumbira kwaaive CEO weSalesforce Marketing Cloud. Ndakave nemufaro wekushandira Scott paSalesforce, uye chaive chiitiko chikuru chekudzidza. Scott aive mumwe wevatungamiriri ivavo aigara achiwana nzira yekufambisa chigadzirwa nekambani kumberi kunyangwe paine chero nzira munzira - yemunhu kana tekinoroji.
Imwe yemapoinzi akaitwa naScott panguva yehurukuro yake ndeyekuti iyo tech stack iri kudzikira nekukosha mukukosha kwayo, uye iyo ruzivo rwevatengi riri kuwedzera mudenga. Takaita nguva dzekuzorora pamatafura edu apo Scott akagovana nyaya mushure menyaya apo izvi zvakaitika neSalesforce uye ExactTarget vatengi.
Veruzhinji Mitengo maringe Nekukosha-Kubva Pricing
Iyo hurukuro yakashanduka ikava hurukuro pamusoro pemitengo yeruzhinji uye yekutengesa-yega kushambadzira maringe nekutengesa kunze uye mutengo-wakatarwa mutengo. Sezvo ndashanda kuSawa nemhando mbiri idzi, ndakagovana ruzivo rwangu neumwe neumwe. Ini ndakakurudzirawo tafura kurodha pasi uye kuverenga ebook raMutsva raMike McDerment, Kutyora Nguva Chipingamupinyi (ndezvemahara).
Yakagadziriswa mitengo inoda mari kana chakakosha purofiti yekumesa kukura kwekambani. Kana iwe usina yakakosha margin, iwe uchazokura zvine muviri. Izvo zvinogona kunge zvakanaka kana iwe uchida nemaune, isina chikwereti kukura kwekambani yako. Asi kukura kunononoka kunouya nenjodzi. Panguva iyo chipingamupinyi chekupinda chekutsvaga mhinduro dzakachipa kana kuvaka yako pachako ichiva chinhu chakakura kwazvo, musika unogona kukupfuura. Kana iwe uchimhanyisa SaaS chikuva nhasi, mikana ndeyekuti iwe unofanirwa kurova apo simbi ichipisa. Sekutaura kwaScott, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kutora mhino dzako reropa.
Kukosha-kwakavakirwa mitengo inopa mukana wekuwana purofiti yakakura nekubvumira mutengi wako kumutengo zvinhu zvako nemasevhisi pane kuti iwe uatarise. Yakagadziriswa mitengo inogona kuve mujaho kusvika pasi kana vakwikwidzi vakakwira - izvo zvavanowanzoita. Kukosha-based pricing kunogona kupa margin uye capital iwe yaunogona kushandisa mukukura. Musiyano weizvo mamwe makambani aipa marezinesi ExactTarget yemamwe makambani yaioneka pane dzimwe nguva. Nepo paive nemabhesuru hapana akakurudzirwa kuenda pasi, pakanga pasina siringi. Saka mubhadharo wezvemari mubatanidzwa wepasi rose unogona kubhadhara zvakati wandei pane meseji pane bhizinesi diki rakasaina pazuva rekupedzisira rekota yekutengesa.
Indasitiri yeemail mubatanidzwa wemaitiro ese ari maviri. Vatambi vakaita saMailchimp vaive nemhando dzemitengo yeruzhinji, nepo ExactTarget yaive nemutengo-wakatarwa mutengo. Makambani maviri aya akaputika mukukura nekuda kwezvigadzirwa zvikuru uye sevhisi inoshamisa - asi pakupedzisira ExactTarget yakahwina mujaho, ichimedza musika webhizimusi uye kutengwa neSalesforce. Kukosha-kwakavakirwa purofiti uye zvine hukasha kutengesa kukura kwakasimudzira kumwe kudyara mukambani - uye zvimwe zvese nhoroondo.
Kuvimba uye Chiremera
Ini ndakambokurukura pamberi pekuti kushambadzira kwepamhepo kunoda zvese kuvimba nechiremera. Mune ngano yeMailChimp vs ExactTarget, ese akazivikanwa neindasitiri. ExactTarget yakashanda nesimba kuti iwane kuzivikanwa kuburikidza nemaindasitiri mishumo senge Gartner naForrester. Ivo zvakare vakashandisa vanhu vakatevera makuru maRFP, Scott akagovana nyaya kwavakakunda vashanu kubva pa5 RFPs izvo zvakasimbisa makambani kukura, asi kwavakazopedzisira vabudirira. SeExpactTarget payakakunda vatengi hombe, ivo vakawedzeredza iwo mabhureki kuti vawane mamwe marangi. Uye vaive neyakajeka timu manejimendi manejimendi iyo yakavaka hupenga hwakavimbika hukama nevatungamiriri veindasitiri.
Panyaya yeMailchimp, ivo vaivimba nekuzvishandira-kutengesa kutengesa, yepamusoro mushandisi interface, inonakidza mhando, uye inopindura sevhisi yebasa. Muchokwadi, pandakavhura yedu DK New Media hofisi, ndakawana inoyevedza chipo bhokisi kubva kuMailchimp ichindikorokotedza. Ini handina kunzwa chero chinhu kubva kuExactTarget (iko hakusi kushoropodza, ini ndakanga ndisiri pane yavo tariso runyorwa). Mailchimp aiteerera pasocial media, akandiziva semunhu anokurudzira, uye aiziva kuti ndaizovaparadzira shoko.
MailChimp uye ExactTarget zvese zvakashanda kugadzira zvakasarudzika zvevatengi zviitiko. Iyo tekinoroji yaive isingakoshe. Makambani ese ari maviri anounza meseji yemagetsi. ExactTarget kuburitsa uye kuburitsa pakutanga kwaive kwakakura kukwevera kukambani kubva kune vebhizimusi vatengi, asi mumakore ekupedzisira yaive account account uye kugona kugadzira zvingangoita zvisingaite mhinduro kune vese vatengi. Vakanga vane chiremera, ndokuvaka kuvimba nekuita kuti basa riitwe.
Yekuzvishandira-pachako maringe nekutengesa Matimu
Kuzvishandira pachako chiitiko chakazara uye chinoda chiratidzo chinoshamisa uye nemafungu ekuziva online. Kana iwe uine chakakura chigadzirwa, unogona kuhwina musika. ndinotenda usimbe waita izvi. Sezvo isu tiine makondirakiti atinoshanda nawo ari mukati uye kunze kwemapurojekiti, ndakashamisika kekutanga pandakagamuchira katsamba kubva kuSlack kuti vakadzorera mari kwandiri kune vashandisi vasina kupinda. Ko kwaitonhorera zvakadii? Kanganwa Anwendung; Ini ndaive ndave nerudo nezvakaitika. (Pasina kutaura kuwedzera giphy kusangana iyo inochengeta kuseka kuyerera zuva rese).
Slack yakapindawo mubhizinesi. Ndicho chokwadi chimwe chinhu chatisingawanzo kuona nechawo-chebasa chikuva. Iyo C-Suite inowanzo kunetsa kupindira neyemagariro uye zvemukati kushambadzira. Kana vatengi vedu vachida kutengesa muC-Suite, isu tinowanzo tarisa mune-emunhu mikana senge kudya kwemanheru, misangano, uye mimwe mikana. Slack yakasarudzika asi yaive netrifecta yechinangwa, hukuru hwechigadzirwa, mutengo uye kukosha, uye tani yekudyara iyo yakagadzira PR wave yakatsvaira online. Icho chiito chakaoma kutevera.
Vatengesi zvikwata vane shanduka. Takakurukura nezvekutengesa munharaunda kwenguva refu, uye iwe uchaona pepa rekuburitsa munguva pfupi kubva kwatiri nemimwe mikana yekudzidziswa. Mumwe anofanirwa kurangarira kuti rwendo rwevatengi mazuva ano rwasundira iyo nguva yezvokwadi pamusuwo wekambani. Vamwe vatengesi vanotenda zvisirizvo izvo zvinoita kuti vatengesi vatore vatore. Zvakapesana kwazvo, vatengesi vanofanirwa kuve vanopinza sezvavaimboita nekuti tarisiro yega yega yaita ongororo yavo uye inongobatana navo pakupera kwekutenga kutenderera. Vatengesi vanhu havapo kuti vadzidzise mutengi; izvo zvinowanzoitwa kare. Chikwata chako Chekutengesa chiripo kukunda zvinonetsa zvakanyanya.
Vatengesi zvikwata zvinowanzo kuve musanganiswa wetarenda.
Matimu ane vechidiki, vatsva vanotengesa vanhu vane hushingi uye vasingatore kwete mhinduro. Sezvo ini ndisingade kutaurirana, ndinovenga kusangana nevanhu ava. Ini ndicharegeredza mafoni avo nemaemail zuva rese nekuti ivo vanowanzo taura neni muzvigadzirwa kana masevhisi andisingade. Izvi zvekutengesa zvinogona kuita kota yako, asi nekufamba kwenguva zvinokuvadza kune chako chigadzirwa ruzivo.
Vakangwara, vatungamiriri vemaindasitiri vane yakazara Rolodex yevatengi iyo yavanogona kutengesa kwakawanda nekudzokorora nekuti vakavaka kuvimba nevatengi ivavo kukambani yega yega yavakashanda. Vatengesi ava ndivo vandinofarira nekuti vanoziva kukosha kwesarudzo yavo kwavanogona kundivigira, uye ndinovimba navo kuti vazvitengese zvinoenderana nezvandinoda. Ivo havazopinde panjodzi yekunditengesera chimwe chinhu chandisingade nekuti havangatyora kuvimba ikoko. Uye ivo mashandisiro enetiweki chero vaigona kunditengesera chimwe chinhu kana kwete.
Izvo zvese zvinodzikira kune ruzivo rwuri kugadzirwa nebhizinesi rako. Izvo zvinogona kuve chiitiko chaicho kuburikidza nechakakwira chigadzirwa, kana icho chingave chiitiko chako pachako kuburikidza nehunhu hwevanhu hwaunazvo zvemukati. Kazhinji yenguva, zvigadzirwa zvekuzvishandira zvinoda toni yekudyara mune ruzivo rwevashandisi, uye pane shoma kana isina nzvimbo yekukanganiswa nekuti vashandisi vako vakakusarudza nekuti ivo havana chido kutaura nemumwe munhu.
Kunyangwe iwe uchigona kuchengetedza mari nekudzora yako yekutengesa vanhu simba, uchafanirwa kuisa mari zvakanyanya mukugadzira yakanakisa ruzivo, kukurudzira rakakura izwi-remuromo, uye kutyaira kutyaira kuburikidza neruzhinji hukama kuti izwi ribude. Izvo hazvina kudhura. Uye kana iwe uchirwisa nehasha chikuva chako kukwikwidza pamusika, unogona kunge usina zvakakwana zvekuisa mari mukushambadzira kunodiwa.
Yechokwadi yepamusoro chigadzirwa ruzivo inogona kukunda kushambadzira mashandisirwo, asi ndiyo inoera grail yezvigadzirwa kushambadzira. Mikana ndeyekuti, iwe unofanirwa kuve nemuganhu wakanaka wekuunza zviwanikwa zvevanhu zvakakosha kuti ukunde zvikanganiso zvese uye uve nechokwadi chekubudirira kwevatengi vako. Kukosha-kwakavakirwa mitengo kunogona kunge kuri sarudzo iri nani mune akawanda mamiriro.
Tags: simbamasimba e brianchaizvomailchimppactsafesaaskutengesa kunotyairwaKugonesa Kugonesasalesforcescott mccorklekuzvishandira saasusimbekuvimbamutengo wemitengokukosha-kwakavakirwa mitengo
TidyMarketer: Yese-In-Imwe SaaS Kushambadzira Hub yeMashambadziro Ekushambadzira
Ndezvipi Zvisina Kuroora, Zvinosimbiswa, uye Double Sarudza-Kupinda?
Sep 22, 2016 na4: 33 PM
Yakakura posvo, Doug. Isu takada kuva newe-uye ndinobvuma, iniwo ndinofunga chikamu chazvo chinodzikira kune kuomarara kwemitengo uye kuda kushanduka kwemakambani akatanga imwe nzira asi angave aine chigadzirwa chakanakira imwe.
Sep 22, 2016 na7: 19 PM